LAGA GANACSAN KARO AALADO
Ka Ganacso Forex, badeecadaha (Commodities), Indices iyo CFDs adoo adeegsanaya Dilaalkaaga onlineka aaminka ah, Meesha ugu Ammaansan ee lagu Ganacsado
Wax ku saabsan Forex
Suuqa forex-ka ayaa ah suuqa ugu weyn uguna caansan adduunka. Iyadoo aanu jirin meel suuq dhexe ah, waxay furan tahay 24 saacadood maalin kasta marka laga reebo sabtida iyo axadda, oo wuxuu furmaa 22:00 GMT Axadda magaalada Sydney, illaa 22:00 GMT Jimcaha magaalada New York. Maxaa yeelay Suuqa Forex ayaa a mid awoodiisa la daadajiyay oo la baahay balaadhni awgeed wuxuu qabo, ma jiro hal waddan ama bangi dhexe oo awood u leh inuu maamulo ama dejiyo qiimayaasha.
Macaamishaydu waxay ka ganacsan karaan macdanaha ugu qaalisan uguna caansan dunida oo leh khidmaha ugu yar (lowest spreads). Dhaqan ahaana loo tixgeliyo aaladaha ‘nabdoon’, ganacsatadayadu waxay u leexan karaan macdanaha qaaliga ah inta lagu gudo jiro xilliyada suuqa ay ku jiraan buyers iyo sellers badan (market volatility).
SLaga bilaabo kaliya 0.02, ganacsatadayadu waxay heli karaan heshiiyo mustaqbal iyo kuwa aan dhacayn oo ah Saliida. Shirkadaha hogaamiya saliida, ganacsatadayadu waxay qaadan karaan faa’idada ah isbadalka degdega ah aaladan.
Equity Market waxaa sidoo kale loo yaqaanno stock market, ilaa xad waa mid aad ugu caan ah ganacsatadayada CFD. Waxaan siinaa macaamiishayda helitaan CFDs ugu caansan dunida iyo shirkadaha guuleysta, si aan uga caawinno ganacsatadayada inay kala leexiyaan maalgashigooda.
Macaamishayadu waxay ka ganacsan karaa noocyo kala duwan oo lacagaha dhijitaalka ah iyagoo adeegsanaya barnaamijka MT4 haystan doolar. Tan iyo markii ugu horeysa ee la siidaayay cryptocurrency sanadkii2009 qiimaha mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan ‘Cryptocurrencies’: ‘Bitcoin’ ayaa kor u kacday in ka badan 4465%. Bulshada sii kordheysa ee dadka ka ganacsada lacagaha casriga ah ee ugu caansan uguna cusub.
Maalgashadayaasha ayaa muujiyey danaynta ay u qabaan ka ganacsiga indices suuqyada saamiyada ugu weyn uguna caansan, iyagoon runtii aan iibsan wax aalad maaliyadeed ah (underlying asset). Ganacsatada ayaa haysta fursad ay ku qiyaasaan hadii index ay doorteen uu kor u kici karo ama hoos usoo dhici karo, taas oo ka caawinaysa inay kala duwaan maalgashigooda.
Macaamiisheenu waxay awoodaan inay ku ganacsadaan macdanta qaaliga ah, indices iyo Badeecadaha kaleh heshiisyo mustaqbalka la xiriira (Future Contracts). Ganacsatadu waxay fursad u leeyihiin inay ka ganacsadaan heshiisyada ilaa taariikhda dhicitaanka iyo sanadka oo dhan.
Aaladahayga laga Ganacsan karo